वर्ष पुरानो र को लागि देख आफ्नो दोस्रो आधा? हामी तपाईं आमन्त्रण गर्न धाउन भनेर हामी संगठित अधिक भन्दा वर्ष. दल बेमतलबको जिस्क्याइले एक प्रभावकारी र छिटो तरिका पाउन एक प्रेम एक. साँझ हुन् जो भन्दा प्रारूप मा»गति डेटिङ»तपाईं भ्रमण गर्न कम्पनी जीवित च्याट इश्कबाज.
भाग हुन पार्टी को वास्तविक डेटिङ बस.
पूर्व-क्रम देखि एक टिकट प्रबन्धक मा फोन वा हाम्रो वेबसाइट मा
एक्सप्रेस पत्ता छन् चार्टर मा अमेरिकी रेस्टुरेन्ट, फिटनेस, क्याफेहरू, बारहरू.
मा तोकिएको दिन र समयमा हामी को लागि प्रतीक्षा गर्दै छन् तपाईं मा तोकिएको स्थान छ । को टिकट दिन मा प्रवेश गर्न प्रशासक (यदि भुक्तानी माध्यम एक मोबाइल संचार,प्रदान, एक रसीद को भुक्तानी लागि पार्टी बेमतलबको जिस्क्याइले) प्राप्त हुनेछ, एक कार्ड संग तपाईंको नम्बर छ । मा जारी कार्ड तपाईं गर्न सक्छन् मार्क आफ्नो मनपर्ने पार्टी सदस्य डेटिङ. कार्ड वैकल्पिक छ, तर सबैभन्दा अक्सर, यो सहभागीहरू यो भर्न.
दर्ता पछि, तपाईं एक सीट लिन मा पाइने तालिका मा हल, त्यसैले हरेक तालिका बसे एक मानिस र एक केटी छ । प्रारम्भिक साँझ को गति डेटिङ प्रस्तुतकर्ता बताउँछन् नियम स्थानान्तरण को र सिद्धान्त को भरने कार्ड । बैठक मा प्रत्येक सहभागीले दिइएको छ केवल मिनेट (सामान्यतया यस्तो डेटिङ -). यो समय पछि मानिसहरू । को सदस्य मिनी डेटिङ कुरा गर्न सक्छौं तालिका मा वा, चाहना भने, एक ढिलो नृत्य ।
एक्सप्रेस कार्यक्रम डेटिङ एकल प्रदान एक ब्रेक लागि मिनेट वा दुई मिनेट.
अन्तमा साँझ गति-डेटिङ गर्ने सहभागीहरू भरिएको कार्ड मा, यो पारित
त्यसपछि तपाईं संग रहन सक्छ कुनै पनि सहभागी र चिया एक कप, नृत्य